Alaha u naxariistee Meydka Madaxweyne Yuusuf oo la gaarsiiyay Muqdisho – SBC
Alaha u naxariistee Meydka Madaxweyne Yuusuf oo la gaarsiiyay Muqdisho
Posted by Webmaster on Maarso 25, 2012 Comments
Magaalada Muqdisho Xarunta Dalka Soomaaliya saaka waxaa la soo gaarsiiyay Meydka madaxweynihii hore ee Umada Soomaaliyeed alaha u naxariistee C/laahi yuusuf Axmed halkaaso oo loogu tukaday salaadii Janaasada.
Madaxda sar sare ee Xukuumada FKMG ah ee Soomaaliya ayaa ka qeyb galay salaadii janaasada ee lagu tukaday Madaxweynaha waxaana ka dib salaada janaasada ay halkaasi ka jeediyeen madaxda DKMG ah khudbado ay uga sheekeynayaan Mudnaanshaha madaxweynahii hore ee Dalka Alaha u naxariistee.
Meydka madaxweyne Yuusuf oo lagu daday Calanka Umada Soomaaliyeed ayaa iminka lagu wadaa in loo qaado magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug halkaasi oo uu ka dhici doono aaska Madaxweynaha .
Wariye yaasha SBC ee ku sugan Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug ayaa soo sheegaya in qaban qaabo aad u sareysa ay ugu jiraan dadka reer gaalkacyo iyo qaar ka mid ah Madaxda Maamulada Puntland iyo Galmudug sidii uu u dhici lahaa Aaska Madaxweyne C/laahi Yuusuf Alaha u naxariistee.
Maarso 25, 2012 at 8:44 am
Asc dhamaan ummada somaliyeed Waxaan uga tacsiyeynaa geeridii naxdin lahayd oo ku timid madawweynihii uma somaliyeed waxaana lagu xusuusan doonaa dowlada puntland Iyo tan federalka oo uu aasiaasii dhidibada u taagay dowladahaad Iyo heshiiska nanada Ee galkayo oo Dadkii ku dhashay heshiiskAas kadib ay maanta caruur leeyihiin madama uu heshiiskAas najaxay